Moloka'i Is Hawaii's Most Natural Island
Etazonia Hawaii Maui
Moloka'i no nosy fahadimy indrindra amin'ny Nosy Hawaiiana miaraka amin'ny faritra misy kilaometatra 260 kilaometatra. Molokai dia 38 kilaometatra ary 10 kilaometatra ny sakany. Ho henonao koa ny Moloka'i izay antsoina hoe "nosy mahafinaritra."
Ny mponina sy ny lehibe
Raha ny fanisam-bahoaka amerikana 2010, ny 7,345 ny mponina tao Molokai. Efa ho ny 40% -n'ny mponina no avy amin'ny Hawaiian fiantsoana, ka ny anarany taloha, "The Most Hawaiian Island."
Maherin'ny 2500 amin'ireo mponin'ny nosy no manana ronono Hawaiianina mihoatra ny 50%. Filipino no vondron'olona foko lehibe indrindra.
Ny tanàna lehibe dia Kaunakakai (mponina ~ 3,425), Kualapuu (mponina ~ 2 277), ary Maunaloa Village (mponina ~ 376).
Ny orinasa lehibe dia ny fizahan-tany, ny omby, ary ny fambolena samihafa.
Ny seranam-piaramanidina Moloka'i na ny seranam-piaramanidin'i Ho'olehua dia miorina eo afovoan'ny nosy ary manompo ny Hawaiian Airlines, Makani Kai Air ary Mokulele Airlines.
Ny Kalaupapa Airport dia miorina ao amin'ny Saikinosy Kalaupapa roa kilaometatra avaratry ny fiarahamonina Kalaupapa. Izy io dia manompo amin'ny fiaramanidina ara-barotra sy chartera kely mitondra ny fitaovana ho an'ny marary Hansen sy ny mpiasan'ny National Historical Park ary koa ireo mpitsidika andro maromaro.
Manana faritra maromaro ny toetr'andro i Moloka'i. Môtô Moloka'i dia mangatsiatsiaka sady matevina miaraka amin'ireo ala mikitroka sy lohasaha. Ny Moloka'i Andrefana sy Afovoany dia mafana kokoa amin'ny tany maina manerana ny morontsirak'i West Moloka'i.
Ny salan'isan'ny ririnina amin'ny ririnina any Kaunakakai dia manodidina ny 77 ° F mandritra ny volana mangatsiaka indrindra amin'ny volana Desambra sy Janoary. Ny volana mafana indrindra dia ny volana Aogositra sy Septambra ary 85 ° F ambony indrindra.
Ny salanisa isan-taona any Kaunakakai dia 29 metatra monja.
Miles of Shoreline - 106 kilaometatra.
Isan'ny fipetrahana - 34 fa 6 monja no heverina fa azo atao.
Tranobe telo ihany no manana tranom-panjakana.
Parks - Misy valan-panjakana iray, Pala'au State Park; Toeram-pambolena sy toeram-piompiana; ary Park National Historical Park, Kalaupapa National Historic Park.
Highest Peak - Kamakou (4,961 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina)
Mpitsidika, fialamboly, ary mahaliana
Isan'ny mpitsidika isan-taona - Approx. 75.000
Zava- baventy manan-danja - Ao West Moloka'i, ny toeram-pitsaboana lehibe indrindra dia ny Kaluakoi Resort sy ny Maunaloa Town (na ankehitriny no mihidy); ao Central Moloka'i, Kaunakakai; Ary amin'ny endriny atsinanana dia misy efitra fatoriana fandriana sy sakafo maraina, vakansy fialan-tsasatra, ary trano fonenana.
Isan'ny Hotely / Resort - 1
Isan'ny fialan-tsasatra - 36
Isan'ny vakansy / trano - 19
Isan'ny Bed & Breakfast Inns - 3
Ny toerana malaza Visitor - Kalaupapa National Historical Park, Lohasahan'i Hālawa, Papohaku Beach & Park, ary Museum Center & Cultural Center Moloka'i.
Tamin'ny 1980, ny Filoha Jimmy Carter dia nanao sonia ny Lalàna momba ny Lalàna 96-565 manangana ny Kalaupapa National Historical Park ao Moloka'i.
Androany, ireo mpandeha dia navela hitsidika ny saikinosy Kalaupapa izay nandefasana marary nandritra ny 100 taona mahery ny marary vokatry ny Aretin'i Hansen (habokana). Ankehitriny dia latsaky ny enina ambinifolo no mifidy ny hiaina ao amin'ny saikanosy.
Ny fitsidihana iray dia hampianatra anao momba ny kolonely taloha. Haheno tantara momba ny ady sy ny fijalian'ireo voasambotra tany Moloka'i ianao.
Ny fandehanana eto dia fomba tsara ahafahana mifankahalala amin'ny fomba fiainana Hawaiiana tranainy izay mifandray amin'ny fianakaviana, manjono, ary misakafo amin'ny namana.
Ny tennis dia misy amin'ny toerana samihafa manodidina ny nosy. Ny mpankafy fanatanjahan-tena dia hahita tanteraka ny asany amin'ny fisafidianana ny sidina, kayak, surfing snorkeling, ny fiantsonan'ny hoditra ary ny fanatanjahan-tena fanatanjahan-tena. Tsidiho ny "oram-bala" nalain'i Molokai tamin'ny bisikileta na bisikileta bisikileta, na ny fitsidihana manokana nataon'ireo mpitarika ao an-toerana.
Moloka'i dia paradisa mpihanika. Misy tendrombohitra, lohasaha, ary fivoahana amin'ny moron-dranomasina mba hisafidianana, miaraka amin'ireo làlana miteraka fahitana mahatalanjona, toerana manan-tantara ary dobo miorina any an'ala.
Ny Moloka'i dia misy sava-lavaka sivy, izay misy ny "tandroka", antsoina hoe "The Greens ao Kauluwai" na fantatra kokoa amin'ny hoe Ironwoods Golf Course. Ny iray hafa, lalana 18 lavitrisa, dia mandehandeha any amin'ny morontsiraka andrefana, antsoina hoe Kaluako'i Golf Course (mihidy amin'izao fotoana izao).
Raha mila fanampiana bebe kokoa, jereo ny saintsika momba ny zavatra atao mba hanafahana an'i Moloka'i .
Masoandro tany Haleakala
Fomba tsara indrindra handehanana andro mafana ao Maui
Ny Hotely Maui tsara indrindra, Resorts, ary Inns ho an'ny mpivahiny
Zavatra atao atao maimaim-poana amin'ny Maui
Toerana sarobidy azo hanina any Maui Andrefana
11 Toeram-pisakafoanana goavana hanandramana any Downtown St. Louis
Ny taombaovao Baltimore 2017-2018
Toeram-pitsaboana tsara indrindra ao Houston
Hevitra ho an'ny fialantsasatry ny fianakaviana any atsimo atsinanan'i Etazonia
Fetiben'ny Mozika Summer ao Michigan
Fialofana sarobidy sy tsy miangatra ao Nevis
Mankalaza an'i Hanukkah any Alemaina
Top Vacation Destinations Florida ho an'ny fianakaviana
7 Zavatra Mahafinaritra any Delhi miaraka amin'ny ankizy
Bebe tsara indrindra any Paris
Ny fitsidihana 5 tsara indrindra avy any Hong Kong
Phoenix sy Arizona Maps ho an'ny fividianana
University of Chicago - 10 zavatra lehibe hijerena sy atao